Chikwata cheGermany Magwaro, ChiGerman Terms, German Courses | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Mashoko echiGerman » Football yeGermany Terms
Mutambo weGermany nemitambo.
Vadikanwi vashanyi, shamwari yedu br shamwari yakatumira nyaya iyi nekudzokorora zvataurwa nevashanyi vedu yakaongororwa uye yakawanikwa kuva nezvikanganiso zvakawanda munyaya uye yakadzokororwa kwenguva pfupi.
Mutambo weBritain neyemitambo ichavandudzwa peji ino mushure mechinguva chiduku.
Ndinokutendai nokuda kwekunzwisisa kwenyu.
Tinoda kuvonga shamwari dzedu dzakabatanidzwa munyaya yedu nemashoko avo uye dzinotinyevera.
KUFUNGA IZVI: German Turkish Words (Tsamba K)
ChiGerman Chiremba uye Mashoko Anoshandiswa muMushonga
Campaign Time in Electronic Dictionary
Ugur S akati:
03 June 2013, 22: 46
Munhu wose akaita chikamu ichi, ndapota gadzirisa zvikanganiso.
Ndakanga ndisingazivi kuti ndaizogadzirisa kupi.
Chokutanga chezvose ndakashandisa DAS chete, DER DIE haana pfungwa.
Ipapo mazwi acho haana kururama uye izvi zvinoita kuti vadzidzi vadzidze zvisina kunaka.
Nhare iyi haisi DAS FESTUNG, kunyange kana iri DIE FESTUNG. Festung yakapoteredzwa nemvura uye yakapoteredzwa nemasvingo. Icho chiri Kale, asi kwete FOOTBALL TERMINAL.
'Kale' ndiro rechiGerman "Tor" mumutambo webhola.
Ndicho chimwe chezvikanganiso izvozvo.
Kana tisina ruzivo rwe% 100, hatifaniri kutsausa nekutsausa vadzidzi pano.
Tarisa View's Full Profile akati:
26 September 2013, 11: 40
Hama, iwe unongotarisa zvidzidzo zvaunowedzera panzvimbo iyi?
Semuenzaniso, pane zvakawanda zvezvikanganiso maererano nemashoko ekunyorera kwebhokisi pasi munyaya ye Mixed German Lessons section terim. Kana iwe uchizvizivisa iwe semusangano unoshanyira zvikuru wekuGerman, tapota tarisa usati wawedzera nyaya!
Kana zvisina kudaro, vadzidzi vatsva vachaona izvi zvisina kururama ruzivo sekuti vakarurama.